Thursday June 17, 2021 - 17:32:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Guushii ugu weyneed ayay dagaalyahannada Jihaadiga Taliban soo hooyeen tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay in ciidamadiisa uu kala baxo Afghanistan.
Wararka ka imaanaya bartamaha Afghanistan ayaa sheegaya in dagaalyahannada Taliban ay furteen saldhig melleteri oo kuyaal wilaayada Sarbil waxayna gacanta ku dhigeen saanado melleteri oo aad u farabadan iyo gaadiid.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay jihaadiyiinta oo gacanta ku dhigaya illaa 120 gaari iyo keydad hub ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban ayaa lagu sheegay in 'Mujaahidiintu' ay saldhigga Sharket Meydanak ka daabusheen 50 gaari oo nuucoodu yahay Ranjer, 50 gaari oo nuucoodu yahay MB iyo 20 gaari oo gaashaaman.
Sidoo kale Taliban ayaa gacanta ku dhintay 300 oo ah qoryaha Mareykanku farsameeyo ee loo yaqaan M16, weerar kale oo ka dhacay waqooyiga Afghanistan ayaa sababay dhimashada 25 askari sida ay sheegeen ilo wareedyo dhanka amniga ah.
Sawirro: Andalus oo Abaal marin guddoonsiisay dad ka qeyb galay tartan aqooneed.
Sawirro: Sida salaadda Ciidda looga tukaday degmada Saakoow.
Sawirro: degmada Salagle oo si heer sare ah looga ciiday.